စိတ်လှုပ်ရှားရင် သွေးတိုးဆောင့်တက်သလား - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေးစင်တာ » သွေးတိုးရောဂါ » စိတ်လှုပ်ရှားရင် သွေးတိုးဆောင့်တက်သလား
မြန်မာကား များများကြည့်တဲ့သူတွေဆို သိကြမယ့် ဇာတ်ကွက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ သားသမီးတွေ မလိမ္မာတဲ့အခါ မိခင်ဖြစ်သူက သွေးတိုးဝေဒနာခံစားရပြီး အိပ်ယာထဲ ဘုံးဘုံးလဲတဲ့ ဇာတ်ကွက်မျိုးပေါ့။ ဒီလိုမြင်ကွင်းမျိုးကို လူတိုင်းနီးပါး ရုပ်ရှင်တွေ ဗီဒီယိုတွေထဲမှာ မြင်ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။
သာမန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ ပေါတောတောနိုင်တယ်လို့ ထင်ရလောက်ပါတယ်။ မကြာခန မြင်ပါများလာတာကြောင့်ရော၊ နဂိုမူလအခံ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်က အားနည်းတာကြောင့်ရောပေါ့။
ဒါပေမယ့် အထင်မသေးပါနဲ့၊ စိတ်ခံစားချက်ဟာ သွေးတိုးဝေဒနာကို အဆုံးအစွန်ကို ရောက်သွားအောင် တွန်းပို့နိုင်တယ်ဆိုတာက အမှန်တကယ်ပဲ? မြန်မာကားတွေထဲက ထိုးဇာတ် သက်သက်ပဲလား?
ပြဿနာကို အဖြေမရှာခင်မှာ သွေးတိုးက ဘယ်လိုရောဂါမျိုးလဲဆိုတာကို အရင်နားလည်ထားဖို့ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သွေးတိုးဝေဒနာဟာ အဖြစ်များတဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ရဲ့ ၃၇% လောက်ဟာ အဆိုပါဝေဒနာ စွဲကပ်နေကြပါတယ်။
ရုတ်ရက်ဆိုရင်တော့ သွေးတိုးဟာ သာမန်ရောဂါတစ်ခုလို့ ထင်မှတ်မှားစရာရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သတိထားသင့်တာက ဒီဝေဒနာကြောင့် တစ်နှစ်ကို လူ ၁၀ သန်းလောက် သေဆုံးနေတယ်ဆိုတာပါပဲ။
သွေးတိုးရောဂါ စွဲကပ်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့်တော့ နှလုံးအဆို့ရှင်ဆီ သွေးပမာဏအများအပြားရောက်ရှိပြီး သွေးလွှတ်ကြောနံရံတွေ ကျဉ်းမြောင်းလာတာကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ ဝေဒနာကို သွေးတိုးတယ်လို့ ဆိုလိုကြပါတယ်။
သွေးတိုးဝေဒနာရှင်အများစုဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်သည့်တိုင် ရောဂါလက္ခဏာတွေကို မမြင်တွေ့ရပဲ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့လူတွေဟာ သူတို့မှာ သွေးတိုးရှိနေတယ်ဆိုတာကို လုံးဝမသိကြပါဘူး။
သွေးတိုးဝေဒနာက သင့်ကို နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါတွေ၊ ကျောက်ကပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေနဲ့ လေဖြတ်တာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သွေးတိုးတာကို လုံးဝပျောက်ကင်းအောင် ကုနိုင်တဲ့ဆေး မရှိသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့်အစားအသောက် နေထိုင်မှုနဲ့ တစ်ချို့သော ဆေးဝါးတွေ မှီဝဲပေးမယ်ဆိုရင်တော့ သက်သာအောင်ကုစားလို့ ရပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ စိတ်ခံစာချက်တွေဟာ သွေးတိုးနဲ့ တိုက်ရိုက်အားဖြင့်တော့ ဆက်စပ်မှုမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သွယ်ဝိုက်တဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့တော့ ဆက်စက်မှုရှိထားပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုဝေဒနာ ခံစားနေရတာဟာ သင့်ရဲ့ ဘယ်ကျန်းမာရေးကဏ္ဍကိုမှ အကျိုးမပြုပါဘူး။ ဒီတော့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ ဆိုးရွားတဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေရှိနေရင် စိတ်နှလုံးမချမ်းမြေ့မှုကို ခံစားရမှာဖြစ်ပြီး ဒါက သွေးတိုးဝေဒနာကို တွန်းအားပေးနိုင်ပါတယ်။
လေ့လာချက်တွေအရ စိတ်ခံစားချက်မကောင်းမွန်ချိန်တွေ၊ စိတ်ဖိစီးနေချိန်တွေမှာ သွေးဖိအားဟာ ယာယီအားဖြင့် ပြင်းထန်နေတတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအချက်ကြောင့်တော့ သင့်ကို သေချာပေါက် နာတာရှည်သွေးတိုးဝေဒနာ ခံစားရတာမျိုး၊ သွေးတိုးဆောင့်တက်တာမျိုးဖြစ်စေတယ်လို့ ယတိပြတ် ကောက်ချက်ချဖို့ မလွယ်ကူဘူးလို့လည်း လေ့လာချက်တွေက ဆိုထားပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးနေချိန်မှာ သင့်ရဲ့ ခန္တာကိုယ်က ဟိုမုန်းတွေ တရစပ် ထုတ်လွှတ်လေ့ရှိနိုင်ပြီး ဒီအချက်က သင့်ရဲ့ သွေးဖိအားကို ယာယီအားဖြင့် မြင့်တက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကြောင့် သွေးကြောတွေကျဉ်းလာမှာဖြစ်သလို နှလုံးခုန်နှုန်းလည်း မြင့်တက်လာမှာဖြစ်ပြီး ဒါကို သွေးတိုးဆောင့်တက်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်အထိ စိတ်ခံစာချက်ကြောင့် သွေးတိုးဆောင့်တက်တယ်ဆိုတဲ့ သက်သေကို တိတိကျကျ ရေရေရာရာထုတ်ဖော်မပြသနိုင်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စိတ်လှုပ်ရှားနေရင်၊ စိတ်ဖိစီးနေရင်၊ ပြင်းထန်တဲ့ စိတ်ခံစားချက်တစ်စုံတစ်ရာရှိနေရင် သွေးတိုး၊ နှလုံးရောဂါနဲ့ လေဖြတ်ခြင်းတွေဖြစ်ဖို့ နီးစပ်တာကတော့ အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုဖြစ်လာဖို့ဆိုရင် သင်ဟာ သွေးတိုးနဲ့အတူ အောက်ပါ ဝေဒနာတွေကို တွဲဖက် ခံစားနေရသူတစ်ဦးဖြစ်ဖို့ သေချာသလောက် နီးပါးပါပဲ။ ဒါတွေကတော့ –
ဒါ့အပြင် ဆေးလိပ်အလွန်အကျွံသောက်တာ၊ အရက်နဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး အလွန်အကျွံသုံးစွဲတာ၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ အစားအစာတွေ ပုံမှန်စားဖြစ်နေတာလိုမျိုး လူနေမှုပုံစံတွေကလည်း သွေးတိုးဆောင့်တက်စေဖို့ တွန်းအားဖြစ်စေပါတယ်။
ဒါတွေကို ရှောင်လွှဲနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ တစ်ပတ်ကို လေ့ကျင့်ခန်း ၃ ကြိမ်ကနေ ၅ ကြိမ်ဝန်းကျင် ပုံမှန်လုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပြီး တစ်ကြိမ်ကို နာရီဝက်ဝန်းကျင် အချိန်ပေးလုပ်ဆောင်ပေးဖို့ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးတာဟာ စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိတ်ခံစားချက်အခြေအနေတွေကို တည်ငြိမ်အောင် အထောက်အကူဖြစ်စေပြီး သွေးတိုးကိုလည်း ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။
အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့သလိုပဲ အပြင်းအထန် စိတ်လှုပ်ရှားတာ၊ စိတ်ဖိစီးနေတာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျနေတာတွေဟာ သွေးတိုးဝေဒနာကို သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ တွန်းအားပေးနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် လေ့လာချက်တွေအရလည်း စိတ်ဖိစီးမှုကင်းနေရင် သွေးတိုးဖို့ အခွင့်အလမ်းနည်းတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ဒီတော့ စိတ်မချမ်းသာလို့ သွေးတိုးဆောင့်တက်တယ်ဆိုတာက အပြည့်အဝ မမှန်ပေမယ့် စိတ်ချမ်းသာအောင်နေထိုင်တာဟာ သွေးတိုးဝေဒနာကို သက်သာစေမယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တာကတော့ ၁၀၀% အမှန်တရားဖြစ်ပါတယ်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ မတ် 26, 2020 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း မတ် 26, 2020